कोरोना रोकथाममा के गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय ? – The Public Today
न्युज कारखाना असार ६, २०७७ ७:०८ pm
काठमाडौं, असार ६ गते । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदा सरकार के गरिरहेको छ ?
परीक्षणको दायरा किन व्यापक भएन ? विदेशबाट फर्कने नेपालीको स्वदेश फिर्ता, क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कतै आफैँभित्र अल्मलिएको त होइन ?